Izindaba - i-interpack nezakhi ze-2021 zikhanseliwe
Ngokuvumelana nabalingani bayo kwezinhlangano kanye nezimboni, kanye nekomidi elelulekayo lezokuhweba, uMesse Düsseldorf uthathe isinqumo sokukhansela zombili izinqubo zokuxhumana kanye nezingxenye ze-2021, ezihlelelwe ukwenzeka kusukela ngomhla ka-25 kuFebhuwari kuya ku-3 Mashi, ngenxa yemikhawulo ehlobene ne-COVID -19 ubhadane.
“Ngomhlaka 25 Novemba, uHulumeni Wombuso kanye nezwe laseJalimane bathatha isinqumo sokusebenzisa izindlela eziqinile eJalimane, nokuthi bazinwebele lezi zinyathelo onyakeni omusha. Lokhu, ngeshwa, akunikezi isizathu sethemba lokuthi isimo sizothuthuka kakhulu phakathi nezinyanga ezizayo. Lokhu kuzothinta yonke imicimbi kaMesse Düsseldorf kwikota yokuqala, ”kuchaza uWolfram N. Diener, isikhulu esiphezulu seMesse Düsseldorf. "Manje sesigxile ohlelweni olulandelayo lwe-interpack, oluzokwenzeka ngoMeyi 2023 ngokohlelo, futhi esizongenelela ngalo ngokunikezwa kwe-inthanethi okunwetshiwe."
UMesse Düsseldorf wayenikeze ababonisi ababhalisiwe imibandela ekhethekile yokubamba iqhaza kwabo futhi ngasikhathi sinye wabanikeza ilungelo elingavamile lokuqedwa kwalezi zinkampani ezazingakwazi noma ezazingafuni ukubamba iqhaza.
“Ngaphandle kokutholakala kwemakethe okuyingqayizivele, ihlinzeka ngokuthi, i-interpack ibonakala kakhulu ngokushintshana ngqo kwemininingwane phakathi kwezinkampani ezihola phambili ezimakethe kanye nabenza izinqumo eziphezulu ngamagama ezimpawu emhlabeni wonke. Siyasamukela isinqumo sikaMesse Düsseldorf sokukhansela i-interfack 2021 futhi sigxile kwi-interpack 2023, ”kuphawula uChristian Traumann, uMongameli we-interpack 2021 noManaging Director & Group President eMultivac Sepp Haggenmüller SE & Co. KG.
“Emkhakheni wezimboni, imihlangano yokubonana nabantu nokuhlangenwe nakho bukhoma kusabaluleke kakhulu, ikakhulukazi uma kukhulunywa ngobuchwepheshe obuyinkimbinkimbi. Kokubili kunika amandla ukuqhathaniswa kwemakethe okuqondile futhi kudale imibono emisha kanye nemikhombandlela emisha namanethiwekhi - lokhu amafomethi aku-inthanethi anikela kuphela ngokwengxenye, ”kwengeza uRichard Clemens, uMqondisi Ophethe we-VDMA Food Processing and Packaging Machinery Association. "Manje sesibheke phambili ekungeneni ngempumelelo phakathi kuka-2023, lapho imboni izophinde ihlangane khona embukisweni wayo ohamba phambili wokuhweba emhlabeni wonke eDüsseldorf."